Laab Iskotish ah, bisadda leh muuqaal macaan | Bisadaha Noti
Dhamaan bisadaha, iyadoon loo eegin noocooda ama iskutallaabtiisa, waxay leeyihiin wax gaar ah. Marka laga hadlayo Isku-laabkii Scottish-ka, dhegihiisa soo dhacaya iyo araggiisa macaan ayaa ka dhigaya wax ka badan hal iyo in ka badan laba ayaa doonaya inay nolosha la wadaagaan.
Waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan, dabeecaddeeduna sidoo kale waa soo jiidasho. Wuxuu si wanaagsan ula noolaadaa carruurta, wuxuuna jecel yahay inuu udub dhexaad u ahaado, wax runtii u soo jiidan doona bini'aadamka ku raaxeysanaya la joogista saaxiibkooda cadhada leh. Baro wax walba oo ku saabsan Isku-xirka Iskotishka.
1 Asalka Isku laabka Iskotishka
2.1 Waa maxay rajada nololeed ee Xirmooyinka Iskotishku?
3 Habdhaqanka taranka
5 Waa imisa qiimaha Isku-laabashada Iskotishku?
5.1 Miyaad ku heli kartaa bisadaha iskotishka lacag la’aan?
Asalka Isku laabka Iskotishka
Asalka bisadan quruxda badan waxaa laga helaa Scotland, inkasta oo la rumeysan yahay inay sidoo kale yeelan karto hiddo-wadayaal Shiineys ah. Sannadkii 1961dii lamaane iskotish ah ayaa go'aansaday inay ka tallaabaan bisaddooda Suzie, oo lahayd dhago jilicsan, oo leh British Shorthair. Shan sano kadib iyaga laftoodu waxay u diiwaangeliyeen nacasyadan inay yihiin Scottish Fold. Intaas ka dib, guusha taranka kaliya ayaa kordhay. Si kastaba ha noqotee, 1974 meydadkii rasmiga ahaa ee Ingiriiska ayaa ku qasbanaaday inay mamnuucaan, maaddaama xayawaanadan ay ka soo gaareen cudurka arthritis-ka ee addimada iyo xubnaha ay sababeen hiddo-wadaha weyn ee Fold.
Nasiib wanaagse, dhawr sano ka dib ayaa xalku ka iman lahaa gacmaha kuwa soosaara Mareykanka iyo hiddo-wadayaal. Waxaa soo baxday in dhibaatadu ay sabab u ahayd isku darka Scottish Fold; Markii ay noocyo kale soo dhexgaleen, sida Scottish Straight ama British Shorthair, bisadaha ma lahan dhibaatooyin wada jir ah. J) Haa, sanadkii 1974 ayaa waxaa si rasmi ah u aqoonsaday Ururka Bisadleyda Fanaaniinta (CFA).
Laabkii Iskotishka Waa bisad dhex dhexaad ah, culeyskeeduna yahay 4 ilaa 6kg haddii ay lab tahay, iyo 3 illaa 5kg haddii ay tahay dhedig.. Waxaa lagu gartaa yeelashada jirka muruq iyo is haysta, oo leh madax wareegsan, dhagaha oo hoos u dhacaya, iyo sanka oo gaaban laakiin ballaadhan.
Dabada waa dherer dhexdhexaad ah waxayna ku dhammaatay dhibic. Timaha waa kala-dheer ama gaaban, waxayna noqon karaan midab ama qaab kasta.
Waa maxay rajada nololeed ee Xirmooyinka Iskotishku?
Haddii aad hesho daryeel habboon maalin kasta oo noloshaada ah, waa iska caadi inaad ku noolaato 15 sano. Laakiin waxaan ku adkeysaneynaa, tan awgeed, shuruudaha qaarkood waa in la buuxiyo oo aan hoos ku arki doono.
Waa bisad sida ay u qurux badan tahay u qurux badan. Sidoo kale waa aad u jecel, deggan oo ku tiirsan, hagaag, maadaama bisadu ku tiirsanaan karto 🙂. Ma jecla inuu keligiis waqti la qaato, markaa haddii aad saacado badan ka maqnaan doontid si joogto ah, waxaa ugu wanaagsan inaad u keento lammaane uu la ciyaari karo, ama ugu yaraan aad uga tagto waxyaabo uu sameeyo, sida u ciyaarida is-dhexgal bisadaha ama raadinta qaybo cunto ah oo aad uga tagtay qarsoodi. Inta soo hartay, waxay si fiican ula qabsaneysaa meel kasta, ha noqoto guri dabaq ah, dabaq ama guri.
Xiisad ahaan, waa in sidaas la dhaho codkeedu aad ayuu u macaan yahay iyo inaad ku jeclaan kartid qof qaraabo ah inta kale. Laakiin, haa, qof walba waxaa loola dhaqmi doonaa si isku mid ah xushmad 😉.
Si dhogortaadu caafimaad u ahaato inta ugu badan ee suurtogalka ah, waxaad u baahan tahay inaad siiso taxaddarro taxaddar ah, kuwaas oo ah:
Cuntada: waa inuu noqdaa mid tayo sare leh, oo aan lahayn dalag iyo wax soo saar.
Nadaafadda: indhaha iyo dhegaha waa in lagu nadiifiyaa laba ama saddex jeer usbuucii iyadoo faashad nadiif ah iyo dhibco gaar ah oo isha ah.
Caafimaadka: In kasta oo ay caafimaad wanaagsan tahay, tijaabooyinka timo dhaadheer waxay yeelan karaan kubbado timo oo lagu baabi'iyo malta bisadaha.
Waa imisa qiimaha Isku-laabashada Iskotishku?
Haddii aad ku iibsanaysid meel xirfadlayaal ah, waxa caadiga ah waa inay iyagu isweydiiyaan 700 iyo 1000 yuuro. Dukaanka xayawaanka la joogo wuxuu kugu kici karaa nus ka badan ama ka yar. Laakiin iyadoon loo eegin meesha aad aadeyso inaad ka iibsato, waa inaad hubisaa in xayawaanku ku sugan yahay caafimaad wanaagsan, tamar leh oo aan lahayn astaamo cudur.
Sidoo kale, aad ayey muhiim u tahay inaadan kala tagin hooyada wax kayar labo bilood, maadaama da'daas uu wali baranayo waxyaabo hooyadiis oo kaliya ay bari karto, sida sida bisadu u dhaqanto. Haddayna sugayeen inuu saddex bilood jirsado, ka sii wanaagsan, maxaa yeelay habkaas waad hubin kartaa inuusan mustaqbalka la kulmi doonin dhibaatooyin nabadgelyo-darro.
Miyaad ku heli kartaa bisadaha iskotishka lacag la’aan?
Haddii aad rabto in qoyskaagu la noolaado bisad noocan ah oo aad jeceshahay inaad hesho eey bilaash ah, waa inaad ogaataa taas waxaad u badan tahay inaad nasiib ka baxday. Maaddaama ay tahay nooc saafi ah, soosaarayaashu waxay ku dadaalayaan sidii ay u ilaalin lahaayeen aafada, taasina waxay u baahan tahay kharash.
Laakiin waxaad ka heli kartaa muunad qaangaar ah oo korsasho ah, ama bisad isku dhafan.
Isku-xirka Iskotish-ka waa nin dhogor badan leh muuqaal iyo dabeecad ka dhigaysa in ka badan hal jacayl isaga. Sidaa darteed, waxaan ku soo afjaraynaa qodobkaan adoo ku dhejinaya sawirro dheeri ah si aad ugu raaxeysan karto.:
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Isku laab Scottish, bisadda oo leh indho macaan
Haye, waxaan raadinayaa laab Scottish ah, fadlan ila soo xiriir haddii aad mid leedahay iyo inta, ama haddii aad taqaanid qof iibiya.
Jawaab ku bixi Daniel Villanueva
Waxaan kugula talineynaa inaad raadiso beero bisado oo ah noocyadan aaggaaga ah.